[Zava-dehibe] Fampandrenesana sy fangatahana amin'ireo mpitsidika (mifandraika amin'ny areti-mifindra Coronavirus) | Ota Bunkanomori
Ao amin'ny fotodrafitrasa tantanan'ny Ota Ward Cultural Promosition Association (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori), ny minisiteran'ny Fahasalamana, ny asa ary ny fiahiana ara-tsosialy ary ny Ota Ward dia manaparitaka vaovao momba ity aretina vaovao voan'ny virus coronavirus ity. ny vaovao farany, mijery akaiky ny fisorohana ny aretina sy ny fisorohana ny fihanaky ny aretina izahay ary mandray ireto fepetra manaraka ireto.
Mangataka ny fahazoan-kevitrao sy ny fiaraha-miasa izahay mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpitsidika rehetra ary hisorohana ny fihanaky ny aretina.
Ezaka fisorohana aretina
Ny alikaola manosotra dia apetraka amin'ny faritra maro amin'ilay trano, ary apetraka amin'ny savony tsirairay ny savony misy rano.Ampiasao raha ilaina.
Ao anatin'ny trano dia manao desinfection patrol matetika im-betsaka isan'andro izahay amin'ny alàlan'ny diluents.
Ho an'ireo mpiasa nifandray tamin'ny mpanjifa dia hanao sarontava izahay mba hitarika sy hamaly.
Afisy manazava momba ny fanasan-tanana sy ny fombam-bavony no navoaka tao amin'ny efitrano.
Fangatahana amin'ny mpitsidika
Raha manana soritr'aretina toy ny hatsiaka ianao dia miangavy anao mba tsy hitsidika ny tranombakoka.
Miaraha miasa amin'ny fanaovana sarontava araka izay azo atao ao amin'ny efitrano.
Raha mikohaka na mievina ianao dia miaraha miasa amin'ny "etikety mikohaka" izay manarona ny vavanao amin'ny sarontava, mosara, tavy, ao anatin'ny palitao sy tananao.
Fomba fanasana tanana mety
Momba ny fitsipi-pifehezana kohaka
Momba ny fanaovana fampisehoana sns.
Nofoanana na nahemotra ny seho sasantsasany notontosain'ny Fikambanana.Miankina amin'ny valiny sy torolàlana avy amin'ny firenena sy ny Ota Ward, ny fisehoana izay mety foanana na ahemotra dia mety hitranga amin'ny ho avy.Hotazoninay foana ianao amin'ny toe-java-misy farany amin'ny tranokalanay sy ny kaonty Twitter ofisialinay, ka zahao azafady raha mikasa ny hitsidika anay ianao.
Ny fampisehoana sy ny kaonferansa natao isaky ny toerana dia hita taratra araka izay azo atao tao amin'ny pejy fandraisan'ny fikambanana "XNUMX Building Event Calendar", fa mba zahao amin'ny mpikarakara tsirairay raha mila vaovao farany.